Yunivhesiti Mukusiyana »Hodges University
Tenga Amazon Smile
Degree uye Certification Chirongwa Kutsvaga
Kudzidzisa uye Mari
Net Mutengo Calculator
Dhigirii Dhidhiini Mafomati
Hodges University iri Kutungamira iyo Nzira Yekusiyana muDzidzo yepamusoro
Musiyano inzira yehupenyu kuHodges, uko huzivi hwekusiyana hwakasimba. Yunivhesiti yedu inosimbiswa uye kupihwa simba needu akasiyana-siyana, enharaunda-tsika nharaunda yevadzidzi, fakaroti, uye vashandi vanounza kuwanda kwemanzwi nemaonero kune edu akagovaniswa mabasa. Isu tinoremekedza uye tinokoshesa kukosha kwakasarudzika kwevanhu vanobva kumarudzi ese, madzinza, mazera, varume kana vakadzi, zvitendero, zvebonde, hurema, hupfumi kana veteran chinzvimbo, uye mamwe maonero akasiyana uye misiyano yemunhu mumwe, uye tinokoshesa kusiyana kwekufunga. Takazvipira kushivirira, kunzwisisika, kunzwisisa, nekuremekedzana pese pese munharaunda medu, uye tinosimbisa vimbiso yedu yekupa nzvimbo inogamuchirwa kune vese uye vese.
Hodges University yakatumidzwa zita rekuti Dhivhosi uye Inosanganisira Mutungamiriri neInstitute for Diversity Certification.
# 3 Yakachengeteka Koreji Makampasi muFlorida
Inonzi Niche Makoji Akasiyana-siyana muFlorida
Ini Ndakagadzirira Kunyorera Izvozvi!
Ongorora Zvirongwa Zvedu
Nei Kusiyana Kwakakosha muKoreji?
Mumwe nemumwe wedu anouya kukoreji yedu kana yunivhesiti yesarudzo needu seti yezvakaitika izvo zvinoumba nzira yatinoona iyo nyika. Sezvo isu tichitanga kusangana nevanhu vatsva mukati mevatinodzidza navo uye kutora makosi navo, isu tinotanga kuona kuti zvedu zviitiko ndizvo chaizvo - zvedu zviitiko.
Nepfungwa dzakavhurika, tinodzidza kuti zvinoitika zvevamwe zvinounza sei maonero matsva kune edu maonero uye nzira yatinoona nayo nyika. Kuvhura pfungwa dzedu kuti tinzwisise kubatanidzwa, dzinza, dzinza uye kusiyana kwevakadzi, chinzvimbo chevagari, kusiyana kwezvitendero, zera, uye mamiriro ehupfumi zvinoita kuti tive vanhu vakakwana. Sezvo iwe uchienda kunoshandira neiyi nyowani maonero, iwe unosimudzira kukwikwidza kweAmerica mune zvemari.
Hodges Yunivhesiti inotarisa pakuvaka mabhiriji kunharaunda yakakura uye kushanda nemapoka kuunza yakatarisa uye yakanyanya kusimbiswa tarisa pane zvinoitika zvekusiyana uye kusanganisa kugona kuburikidza nekubatana kwenharaunda. Achitaura nekutarisisa uku, Hodges anopa karenda yemabasa akasiyana-siyana evadzidzi vekoreji uye nenharaunda zvakafanana. Svikira kuti unzwisise zvinoita kuti isu tiite takasiyana uye takasarudzika, ona tsika dzakasiyana mukuita, uye iwe uchakura kuva munhu anogamuchira pachena mutsauko wevamwe. Aya maonero matsva anokutendera iwe kuti usimbise kunzwisisa kwako kwevamwe vari munzvimbo yebasa.
Hodges U Akagamuchira Sei Kusiyana?
Hodges U inogamuchira kusiyanisa munzira dzakawanda.
Sei? Nekugadzirisa matambudziko anouya pamwe nekuchinja kwevanhu, maonero akasiyana, uye kurongeka pabasa. Hodges anotarisana nematambudziko aya aine tarisiro yekubatanidzwa, kugona kwetsika, uye kuenzana. Nenzira iyi, iyo Yunivhesiti inoshanda kugadzira rakapfuma uye rakaorera tsika kuburikidza neyedu dzakasiyana vadzidzi muviri. Izvi zvakasiyana zvinobatsira vadzidzi kuti vanzwe vakapiwa simba uye zvinogona kuunza yavo yega kudzidza nekukura.
Nei Uchifanira Kugamuchira Kusiyana?
Kana iwe uchironga kushanda munzvimbo yekutarisira, kana kunyangwe pane timu, zvakakosha kuti iwe ugamuchire nharaunda yemhando dzakasiyana kuti ubudirire. Hodges akadzidza kuti manejimendi anhasi anofanirwa kuve nehunyanzvi hwekuita tsika dzakasiyana-siyana, uye hunyanzvi uhu hunokubvumidzawo kuve nhengo inobudirira yechikwata. Iwe zvakare uchafanirwa kuve neyako mutoro wehuwandu hwekugadzirwa uye kusanganisirwa kune vese munzvimbo zhinji dzenzvimbo dzebasa.
Ichi chinodikanwa chekuti iwe ugone kushanda pazvikwata zvine mutsika nemhando dzakasiyana-siyana ndidzo simba rinotungamira kuzvipira kwaHodges mukugadzira nharaunda dzakasiyana. Zvese zvatinoita zvakanangana nekugadzira nharaunda yekuti vadzidzi vedu vabudirire, uye sarudzo yedu kupa akasiyana mamiriro ekunze humbowo hwekuzvipira kwedu kunzira yako yekubudirira.
Hodges University Nharaunda
Hodges Kusiyana Statistics
Hodges University inogamuchira vadzidzi vanobva kumarudzi ese, madzinza, mazera, vakomana, zvitendero, zvebonde, hurema, hupfumi kana veteran chinzvimbo, uye mamwe maonero akasiyana uye akasiyana misiyano. Tinokurudzira mumwe nemumwe mudzidzi kuti ataure uye adzidzise vamwe pamusoro pezviitiko zvavo zvakasiyana kuti vagadzire mamiriro ekudzidza eruzivo rwakawedzerwa kune vese.
Isu takazvipira kugadzira kosi dzakasiyana dzevadzidzi vese kuti vabudirire. Pazasi pane huwandu hweHodges University.
Race uye Ethnic Kunyoresa
Ichena, Isiri-Mepanishi: 38%
Zvimwe, zvakasanganiswa, kana zvisingazivikanwe: 6%
Vadzidzi vevashoma kwazvo uye mwero wekusiyana kwemarudzi weHodges University ndeye 62%. Uku kusiyanisa kunoita kuti tive rimwe remasangano akasarudzika edzidzo yepamusoro muFlorida. Isu takave zvakare takatumidzwa sevanzvimbo yepamusoro veSpanish Serving Institution. Kuve yunivhesiti yakasiyanasiyana muFlorida idambudziko ratino gamuchira, nekuti mukutsvaga kupa vadzidzi dzidzo dzakasiyana - isu tinotsvaga kugadzira nyika iri nani kwatiri tese.
Bata Hodges U Nezve Kusiyana
Tinogamuchira kubvunza kwako nezveKusiyana uye Kubatanidzwa zvese pamusasa uye mukati menzanga. Ndapota taura nesu pa:
Hofisi yekusiyana, Kuisirwa uye Kugona Kwetsika
4501 Colonial Boulevard, Kuvaka H
Washington, DC 33966
YEMAHARA MYERS KAMPASI
Tsigira Hodges U Paunotenga Amazon!
Dzvanya pane iyi link iripazasi iwe paunotenga kuAmazon uye upe chikamu chekutenga kwako kuHodges Hawks fund!
© Copyright Hodges University 2018-2021 | Yakavanzika Mutemo | Ruzivo rweVatengi | Hodges Yunivhesiti inzvimbo yakatenderwa neSouthern Association yemakoreji uye Zvikoro Commission kumakoreji ekupa vanobatana, bachelor's, uye masters degree. Pamibvunzo nezve kubvumidzwa kweHodges University, bata Commission kuKoreji muna 1866 Maodzanyemba Lane, Decatur, Georgia 30033-4097 kana kufona (404) 679-4500. Mimwe mibvunzo yese ine chekuita nehurongwa hweHodges University, zvirongwa zvekubvumirwa, rubatsiro rwemari, nezvimwe, zvinofanirwa kuendeswa kuHodges University uye kwete kuSouthern Association yemakoreji uye Zvikoro Commission kumakoreji. Iyo kosi yezvidzidzo yega yega yekiriniki chirongwa paHodges University inosangana nehunyanzvi marezinesi zvinodiwa zvehurumende yeFlorida. Aya mapurogiramu emakiriniki anosanganisira Master weSainzi muKiriniki yeMental Health Counselling, Bachelor yeSainzi muNursing, Mubatanidzwa weSainzi muPhysical Therapist Mubatsiri, Chitupa muEmergency Medical Technologist, Chitupa muParamedics, uye Chitupa muUnyanzvi hweNursing. Hodges University haina kuita danho rekuti zvirongwa, zvakanyorwa pamusoro, zvinosangana nehunyanzvi hwezvemvumo zveimwe nyika. Vadzidzi vanoronga kutamira kunze kweFlorida vanofanirwa kusimbisa kuti iyo kosi inosangana nezvinodiwa nenyika.
Isu tinoshandisa makuki uye mamwe maturu ekuunganidza maturusi kugadzira akanakisa emushandisi ruzivo, kuti unzwisise zvirinani mashandisirwo acho ndapota shanyira peji redu rezvemukati. Nekuramba uchishandisa ino saiti iwe urikutipa mvumo yako kuti tiite izvi.Kusvika padanho reGeneral Data Dziviriro Regulation ("GDPR") rinoshanda kwandiri, nekushanyira webhusaiti ino ini ndinobvuma kugadziriswa kweangu Dhata Dhata sekutsanangurwa neGDPR nekuda kwezvinangwa zvakatsanangurwa uye zvakapihwa mumitemo yaHodges, sekugadziriswa nguva nenguva. Ini ndinonzwisisa kuti mune mamwe mamiriro, ndine mvumo yekupokana nekugadziriswa kweangu Dhata Dhata. Ini ndinowedzera kunzwisisa kuti ndine mvumo yekukumbira (1) kuwana kune yangu Dhata Dhata; (2) kugadziriswa kwekukanganisa kana kukanganisa uye / kana kudzima kweangu Dhata Dhata; (3) iyo Hodges inorambidza kugadziriswa kweangu Dhata Dhata; uye (4) iyo Hodges inopa Dunhu Rangu pachikumbiro mumhando inotakurika.